" သူမရေးစပ်ထားတဲ့ Covid -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးကို သီဆိုမယ့် အဆိုတော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျက်နှာကိုကွယ်ကာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ် " - Cele Connections
” သူမရေးစပ်ထားတဲ့ Covid -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးကို သီဆိုမယ့် အဆိုတော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျက်နှာကိုကွယ်ကာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ် “
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ မေလသံစဉ်ကတော့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲ ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။ချိုသာတဲ့ အပြုံးလေးတွေအပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာပေါက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အဆိုပညာမှာလည်း အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တော်လွန်းသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။
မကြာသေးမီကလည်း လက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့Covid -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်းရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုကာ ပရိသတ်တွေကို ချပြခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် Covid -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို ပရိသတ်တွေသိရှိအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကလည်း အရမ်းလေးစားပြီးချစ်ခင်ရတဲ့အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်အတွက် သီချင်းသစ်လေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့ ပြီး “အိမ်မှာနေချင်တာပေါ့”သီချင်းသစ်လေးမေလကပြင်ဦးလွင်ကနေ Demo ပို့ပေးရန်ကုန်မှာ Vocal အသံသွင်းအရမ်းလေးစားရတဲ့အဆိုတော် ကိုခဏလျှို့ဝှက်ထားမယ်နော်ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဟင် ? ? ?မေတ္တာနဲ့Vocal အသံဖမ်းပေးတဲ့ ကိုဝေကြီး၊အပင်ပန်းခံကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ ကိုကြီးဇေယျာလင်း(City FM) နဲ့ ချက်ချင်းရအောင်အကောင်းဆုံးကူညီတီးခတ်ပေးတဲ့ကိုမျိုးဇော်ထက် တို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရပါတယ် ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သီဆိုမယ့် အဆိုတော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျက်နှာကိုကွယ်ကာ ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးလည်း အဆိုတော်ပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်ပါဦးနော်။
Source :မေလသံစဉ် May Melody
” သူမရေးစပျထားတဲ့ Covid -19 နဲ့ပတျသကျတဲ့ သီခငျြးလေးကို သီဆိုမယျ့ အဆိုတျောရဲ့ ပုံရိပျလေးကို မကျြနှာကိုကှယျကာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ မလေသံစဉျ ”
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ မလေသံစဉျကတော့ မွနျမာသံစဉျ သီခငျြးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျရငျထဲ ရောကျရှိလာသူဖွဈပါတယျ။ခြိုသာတဲ့ အပွုံးလေးတှအေပွငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာပေါကျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး အဆိုပညာမှာလညျး အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျတျောလှနျးသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။
မကွာသေးမီကလညျး လကျရှိမှာဖွဈပှားနတေဲ့Covid -19 နဲ့ပတျသကျပွီး ကိုယျတိုငျးရေးစပျထားတဲ့သီခငျြးလေးကို ကိုယျတိုငျသီဆိုကာ ပရိသတျတှကေို ခပြွခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ Covid -19 နဲ့ပတျသကျပွီးဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို ပရိသတျတှသေိရှိအောငျတိုကျတှနျးနှိုးဆျောနတေဲ့သူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးမီကလညျး အရမျးလေးစားပွီးခဈြခငျရတဲ့အဆိုတျောကွီးတဈယောကျအတှကျ သီခငျြးသဈလေးကို ရေးဖွဈခဲ့ ပွီး “အိမျမှာနခေငျြတာပေါ့”သီခငျြးသဈလေးမလေကပွငျဦးလှငျကနေ Demo ပို့ပေးရနျကုနျမှာ Vocal အသံသှငျးအရမျးလေးစားရတဲ့အဆိုတျော ကို
ခဏလြှို့ဝှကျထားမယျနျောဘယျသူဖွဈမယျလို့ထငျလဲဟငျ ? ? ?မတ်ေတာနဲ့Vocal အသံဖမျးပေးတဲ့ ကိုဝကွေီး၊အပငျပနျးခံကူညီအားဖွညျ့ပေးတဲ့ ကိုကွီးဇယြောလငျး(City FM) နဲ့ ခကျြခငျြးရအောငျအကောငျးဆုံးကူညီတီးခတျပေးတဲ့ကိုမြိုးဇျောထကျ တို့ကို ကြေးဇူးအထူးတငျရပါတယျ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သီဆိုမယျ့ အဆိုတျောရဲ့ ပုံရိပျလေးကို မကျြနှာကိုကှယျကာ ဖျောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ CeleConnections ပရိသတျကွီးလညျး အဆိုတျောပုံရိပျလေးကိုကွညျ့ပွီးဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာခနျ့မှနျးကွညျ့ပါဦးနျော။
Source :မလေသံစဉျ May Melody
သူမနဲ့ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေက အသေရရ၊ အရှင်ရရ လိုချင်နေတဲ့ ကောင်လေးအကြောင်းပြောလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ငယ်ငယ်ကအမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကျားပေါက်ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်
လူတကာမလုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်အဖြစ် သံဃာတော်များရဲ့ ကုဋီ (အိမ်သာ) ဆေးပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
” မွေးလအစမှာ သိန်း(၅၀၀)ထီဆုကြီးကို ကံထူးခဲ့တဲ့အွန်လိုင်း ဟာသသရုပ်ဆောင်အလင်းသခင်”